Ungamfundisa njani umntwana wakho ukubaluleka kweenyosi kwindalo | Oomama Namhlanje
Ungamfundisa njani umntwana wakho ukubaluleka kweenyosi kwindalo
UAlicia tomero | 19/05/2021 10:00 | Ukuhlaziywa ukuba 19/05/2021 10:02 | ekufundeni
Ngoku kuza intwasahlobo kulula kakhulu ukufundisa abantwana ukubaluleka kweenyosi kwindalo. Akunyanzelekanga ukuba uhambe umgama omde kuba nakwizixeko ezikhulu siyazibona ezi zinambuzane zincinci zizama ukufumana ukutya kwazo, umungu kunye nencindi ngaphakathi kweentyatyambo.
Kubo bonke abantwana abaye babona umntu ovelise ubusi kufutshane, baya kuba nakho ukufumanisa ngokwabo ukuba bunjani ubuncwane baba bagxeki, kubandakanya zibenza njani ubusi, ijeli yasebukhosini kunye ne-wax. Nangona kufuneka siqaphele ukuba zininzi izizathu zokuba kutheni iinyosi zisithandile.
1 Njani umungu weenyosi?
2 Ukubaluleka kweenyosi kwindalo
3 Ungazikhusela njani iinyosi?
Njani umungu weenyosi?
Siphawule ukuba iinyosi kufuneka bafumane ukutya kwabo ngeentyatyambo. Xa inyosi ifikelela kwintyatyambo ikhupha incindi ukuyisa kwipaneli kwaye ukusuka apho ivelise ubusi, kodwa Ukongeza ekondleni nasekuqokeleleni umungu, ziyangcola.
Umzimba wenyosi ugqunywe ziinwele ezithi xa zibekwe ngaphezulu kwentyatyambo kwaye zingene ngaphakathi, ukumitha ngokulula kwaye uqokelele amawaka eenkozo zomungu emzimbeni wakho. Inyosi iqokelela umungu kunye nectar eyoneleyo ekufuneka iqhekeze iinkozo zomungu ezinamathele phakathi kweenwele.
Kulapho ke kwenzeka umvumvuzelo womnqamlezo, xa inyosi ifika kwaye ibekwe kwenye intyatyambo yohlobo olunye kwaye ifake ipolethi encinci yomungu ekufuneka enye intyatyambo iqale ukuthwala isiqhamo sayo. Ezi zinambuzane ziyafuneka ukuze ungcoliseko olunqamlezileyo okanye ukungcoliswa komnqamlezo kwenzeke. Ukutshintshwa kwepollen ukusuka kwizityalo zesilisa ukuya kwizityalo zabasetyhini.
Kukho izityalo ezingadingi pollination njengoko zinokuvelisa iziqhamo zazo ngokuzimela, kodwa ukuba izinambuzane zenza umungu wazo ziya kuba nesona sivuno sibhetele. Nangona kunjalo, ezinye izityalo ukuba azidluliswanga ngumungu azinako ukuthwala iziqhamo zazo ngokwahlukeneyo kwaye ke ayizukuvelisa.
Ukubaluleka kweenyosi kwindalo
Iinyosi zidlala indima ebaluleke kakhulu kwindalo esingqongileyo, kuba iipesenti ezingama-60 zazo zonke iziqhamo kunye nemifuno esiyityayo kwiplanethi yethu sikwenza oko ngenxa yomungu. Phantse Ukutya okuhlanu kokulishumi esikutyayo kunxulumene nomsebenzi weenyosiNgaphandle kwazo kunye nezinye izinambuzane ezingcolisayo besingayi kufumana kutya.
Kubaluleke kakhulu ukukhusela iinyosi ukuze izityalo zikwazi ukwenza imisebenzi yazo kunye nokuba iplanethi ifumane ukutya kwayo. Ngenxa yoku, abemi kufuneka baziswe ngenkathalo ekhethekileyo kwaye musa ukuvumela iintlobo zakho zinyamalale.
Kuthiwa oko kuye kwakho ukwehla okukhulu kwinani lezinambuzane ezingcolisayo Kuwo onke la mashumi eminyaka adlulileyo, i-herbicides iye yasetyenziswa kwizinga elikhulu okanye iindlela zokulungisa iindlela kwizinga elikhulu. Singayijonga njani Ucoceko olukhulu lwenziwe kwiindawo ezinkulu apho kukho inani elikhulu lezityalo neentyatyambo kwaye ke ngoko kuphelisa ukutya kwezi zinambuzane, kwaye ke oko kususa indawo yazo yokuhlala.
Ungazikhusela njani iinyosi?
Ukuze ukhusele iinyosi kunye nezinye izinambuzane eziyimfuneko ukuze umungu uvumeleke, kufuneka njalo thatha imilinganiselo echanekileyo ngakumbi xa usebenzisa amayeza okubulala ukhula ukuphelisa indawo ezininzi zezityalo okanye izinambuzane ezonakalisa izinambuzane ezingadingi kutshatyalaliswa.
Amafama kufuneka asebenzise imichiza yokubulala izitshabalalisi ngocoselelo nangakumbi. Iinyosi zihlala emhlabeni kwizityalo ezidubulayo xa intyatyambo ivulekile kwaye zihlala zinetyhefu xa kufakwa le khemikhali. Kucetyiswa ukuba isetyenziswe xa iintyatyambo zivaliwe.
Vumela izityalo zasendle nazo zichume kwiindawo ezinokuthi zichume kwaye zingenzi monakalo, njengoko zinceda ukubonelela ngendawo yokuhlala, zivumela ukuba kwakhiwe iindlwane, zondle kwaye zifukame izinambuzane ezingcolisayo.
Kwiminyaka yakutshanje ikhethe ukulima okungaxutywanga kuphuhliso oluzinzileyo kunye nesifundo esisebenza ngakumbi nesibambekayo sendlela yokusebenzisa iyeza lokubulala izinambuzane ngokwemvelo ukunceda ukukhusela indalo esingqongileyo kunye nendalo. Ukongeza, iyanceda ukukhusela umhlaba kunye nokugcina amanzi. Unokufunda okuninzi malunga «indlela yokufundisa abantwana ukukhathalela okusingqongileyo », uthotho lweengcebiso esixoxa ngazo eli khonkco.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Phuhliso » ekufundeni » Ungamfundisa njani umntwana wakho ukubaluleka kweenyosi kwindalo
Unyana wam akanakukwazi
Unyana wam mncinci kule minyaka yakhe